AHR BY BYLỌ AH BY NA INLỌ AH forR for maka Spain | 100% Onu ogugu mmeri | IJE OZI | VISA VISA maka Spain, Mbata na ọpụpụ akụ na ụba site na itinye ego maka nnabata nke Spain site na itinye ego na Spain, obibi site na itinye ego na Spain, obibi site na mmemme itinye ego na Spain, biri
Ebe obibi site na Investment for Spain na Golden Visa
Anyị na-enye Ọrụ Immigrashọn Ọrụ na Spain maka:
● Obibi site na itinye ego na Spain
Nwa amaala site na itinye ego na Spain
Visa Visa ọlaedo na Spain
Passport Paspọtụ nke abụọ si Spain
● Obibi site na itinye ego maka Spain site na itinye ego na ezigbo ala
Best Ndị nnọchite maka obibi site na itinye ego na Spain na ndị ọka iwu maka Nbibi site na itinye ego na Spain na ndị na-ere ahịa maka ụlọ obibi na mmemme nke obibi na Spain na-arụ ọrụ maka nchekwa nke ndị ahịa.
Nbibi site na ndị ọrụ itinye ego na Spain na-enye ọrụ maka obibi site na itinye ego na Spain, Nbido site na mmemme itinye ego na Spain, Nbido site na itinye ego na Spain, Ọnọdụ nke abụọ site na itinye ego na Spain, mmadụ abụọ site na itinye ego na Spain, ụmụ amaala na nnabata site na itinye ego na Spain , Ọnọdụ na-adịgide adịgide site na itinye ego na Spain, Ọnọdụ oge site na itinye ego na Spain, Nbido site na atụmatụ itinye ego na Spain, idencynọgide site na itinye ego na Spain, Citizbụ obodo site na itinye ego na Spain, Citizmụ amaala site na itinye ego na Spain, Citizmụ amaala site na itinye ego na Spain, Citizmụ amaala site na itinye ego na Spain, nke abụọ Ensmụ amaala site na itinye ego na Spain, ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Spain, nnabata na ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Spain, nnabata na ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Spain, mmemme mmekọrịta ụmụ amaala na Spain, Citizmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Spain, Citizmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Spain, nke abụọ paspọtụ na Spain, mmemme paspọtụ nke abụọ na Spain, paspọtụ nke abụọ progr m nọ na Spain, paspọtụ nke abụọ na Spain, obibi na paspọtụ nke abụọ na Spain, paspọtụ nke abụọ na Spain, paspọtụ nke abụọ site na itinye ego na Spain, paspọtụ nke abụọ na Spain, atụmatụ paspọtụ nke abụọ na Spain, atụmatụ paspọtụ nke abụọ na Spain, visa ọlaedo na Spain, visa ọlaedo na Spain, mmemme visa ọlaedo na Spain, mmemme visa ọlaedo na Spain, visa ọla edo nke abụọ na Spain, mmemme visa ọla edo nke abụọ na Spain, visa ọla edo abụọ na Spain, ụmụ amaala na visa ọlaedo na Spain, ibi na visa ọlaedo na Spain, akwụkwọ ikike visa ọlaedo na Spain, atụmatụ visa ọlaedo na Spain, atụmatụ visa ọlaedo na Spain.
“1 kwụsịtụ ngwọta” maka ọnọdụ obibi gị niile site na itinye ego na Spain na nkwado ndị ọzọ.
Obere ego na Spain maka ibi site na itinye ego: EUR 500,000
Okwu Mmalite Spain na Nbibi site na itinye ego
Mụtakwuo banyere Spain
A na-egosi Spain mgbe niile dịka ebumnuche nke otu ụzọ ụwa, ma ọ gaghị esiri ike ịnweta ihe kpatara ya. Enweghị ọtụtụ mba nwere ike ịnye ọnọdụ dị iche iche, na-arụ ọrụ injinia, yana oke ihe edere edekọ yana oke ikuku ya na oke osimiri mara mma.
A gbakwunyere Spain dị ka n'oge gara aga dịka mba kachasị baa uru na mbara ala, dịka nyocha nke mba 169 site na Bloomberg. Nchọpụta ahụ tụlere ihe ole na ole na-agbakwunye na ahụike zuru oke, dịka ọmụmaatụ, ịga ụlọ ọgwụ, mgbanwe mgbanwe gburugburu ebe obibi, na nchịkwa ọdịmma.
Ọzọkwa Spain nwere ọdịnihu kachasị elu nke gafere ụwa n'etiti mba European Union, n'azụ Japan na Switzerland n'ụwa niile, dị ka United Nations gosipụtara. Ka ọ na-erule afọ 2040, Spain na-eche na ọ ga-enwe ndụ kachasị ogologo n'ụwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 86, ndị Japan, Singapore, na Switzerland na-eso.
Nke a bụ isi ihe iri Lucas Fox mere anyị ji atụkwasị obi na ọnọdụ Spain dịka ụzọ ndụ ụwa na-adị nchebe maka oge dị oke mkpa:
1. Ihu Igwe
Lifezọ ndụ ndị a ma ama na-eme ka nkwenye sara mbara na-egosi na ala Iberia nwere ikuku Mediterenian, agbanyeghị n'ezie nke a bụ otu akụkụ nke akụkọ niile na-ekpo ọkụ, nke na-adọrọ mmasị. Spain buru oke ibu, ya na nnukwu ebe di egwu, ebe di egwu, na oke oke osimiri nke na-etikwa Atlantic, nke a bu mba di iche iche na-adighi nma - nke bu ihe ezi uche di na ya iji nweta ego. N'ezie, ọ na-ezo ka mmiri na ndagwurugwu, ma ebe ihu igwe nwere ike ịhapụ gị mgbe ụfọdụ ikuku agaghị. Na agbanyeghị ma ị na-atụrụ ndụ na aja ọcha nke Ibiza, ị na-agbagharị na mmiri nke Pyrenees, ma ọ bụ na-atụgharị na mkpịsị ụkwụ mara mma na-eleghara ụsọ mmiri Galician nke ugwu anya, ọnọdụ ga-abụ onye enyemaka gị.
2. Oke osimiri
Spain nwere 8,000km nke ókèala na ụsọ oké osimiri agwaetiti, gụnyere akụkụ nke oke osimiri kachasị mma n'ụwa. Chee ezigbo mmiri na-acha anụnụ anụnụ, aja ọcha, obi ụtọ na-adịghị mma, ahịhịa ndị a na-ekpuchi ekpuchi, na ịrị elu na-atọ ụtọ. Buru ije, na-eme mkpagharị, ma ọ bụ na-atụrụ ndụ na anwụ, na-akpa ákwà, na-aga sọọfụ, ma ọ bụ na-akwadebe maka marathon.
Nkwenye na-egosi na ị nweta akara ngosi Blue Flag na-egosipụta ọnọdụ Spain na akara ihu nke oke osimiri na ọdịmma, yana oke osimiri 569 (20% nke mkpokọta) enyere ka enyere iji gosipụta ọmarịcha ịdị ukwuu a. 16% nke oke osimiri Blue Blue Flag dị na Spain. Ọrụ siri ike maka ịkwado mmiri n'akụkụ osimiri na-abawanye ihe mkpofu na ihe mkpofu, ma nyere aka ijide n'aka banyere ebe obibi ndị a maka ndị bi na ndụ.
Ndị na-eri nri Spanish egosila na isi atọ nke 'Reslọ oriri na ọ Bestụ Bestụ kachasị mma' nke ụwa kemgbe ọ malitere na 2012. Obodo ahụ emeela aha zuru ụwa ọnụ aha Ferran Adriá na El Bullí (meriri ọtụtụ oge) na Roca Brothers na El Celler Can Roca (merie ugboro abụọ).
4. Oru oru na Ihe Okike
Spain karịrị ọgụ ịlụ ọgụ na flamenco, n'agbanyeghị na mgbakọ ndị a abanyela na ahụmịhe mba ahụ. N'otu aka ahụ, ụwa enyela ọmarịcha ndị ọkachamara, ndị na-eme egwuregwu na ndị edemede, ma na-emekwa ihe ndị a. Goya, Velásquez, Picasso, Miró, Dalí, Cervantes na Gaudí… enwere ike ịnwe ekele maka ndepụta nke ndị mmadụ na ebe akụkọ ihe mere eme, n'okporo ụzọ na n'ọtụtụ ebe nkiri ma gosipụta ebe a na-aja ọdịnala Spanish.
Spain nwere obi uto site n'oge dị anya gara aga mana na mgbakwunye na-enwe ọganihu na-agbanwe agbanwe ma na-eji echiche miri emi o nwere n'oge gara aga iji wuo akụkụ bụ isi na ọkwa mmekọrịta ụwa na ihe ga-abịa. Ebe ọ bụla ị gara na Spen a na-eme, site na ndị Cast Casters na-arụ nnukwu ike ịma aka n'ọtụtụ ebe iji na-arụ ọrụ n'èzí n'ogige ntụrụndụ ma ọ bụ ndị na-agba ọsọ na-anwa ịdọta uche gị n'okporo ụzọ. Gburugburu na mba, ọrụ ọrụ, na ọdịbendị na-ejikwa, ọ bụkwa akụkụ kachasị mma nke ụzọ ndụ.
5. Okpokoro na Nkwurịta Okwu
Nzukọ World Economic Forum tinyere Spain na ọnụọgụ 12 na mbara ala na 'ezigbo ihe atụ' maka ntọala na usoro nchịkwa. Ọ nwere otu n'ime nnukwu okporo ụzọ okporo ụzọ na 17,000km nke ogige, ọdụ ụgbọ okporo ígwè kachasị ọsọ na Europe nke dị ugbu a na Barcelona na Paris, na ikuku na oke osimiri dị egwu.
Yabụ ịgagharị gburugburu dị mfe, na Spain na-enye ndị mmadụ ọtụtụ mkpali ịga njem na nyocha. Ọ na -emepụta ntọala maka ọdịnihu dị ike. Mmepe na azụmaahịa dị elu abụghị ihe omimi, ebe ndọtị brọdbandị juputara na ezinụlọ na ọbụnadị ikike ọha na eze na nchịkwa ọdịmma na-ejide usoro-e.
Ntụziaka dị ịtụnanya - enwere ụlọ akwụkwọ 226 edebara aha na ụwa niile - a na-akwanyere nlekọta ahụike ùgwù site na Europe na oge gara aga, a na-elele ogige ntụrụndụ, na-ehicha okporo ụzọ ma na-ejikwa ahịhịa na enweghị isi.
6. Omenala na ememme
Ememme bụ ọrụ nka na Spain. Ọ bụ maka ebumnuche na ebumnuche niile a na-apụghị ichetụ n'echiche ruo ụbọchị asaa iji gafee na-enweghị ememme nke onye ọ bụla nwere ike ịghọta. Dị ka mba Katọlik, Spain nwere ọtụtụ ememe siri ike na ngagharị. Goliath, mkpokọta, tebụl dị ogologo n'okporo ụzọ mechiri emechi na ịghagharị ịgbà bụ ihe dị mkpa maka ndụ n'obodo, obodo na obodo ọ bụla.
Pamplona's San Fermin ememe, ama 'agba nke oké ehi', na ahụkebe keogbaaghara 40,000 ndị ikom eke ngwaahịa dabeere fling fest nke La Tomatina na Valencia nwere ike nweta atụmatụ zuru ụwa ọnụ ma ọgaranya mgbakọ na nsọpụrụ maka a ụbọchị pụọ ọrụ, a na-agba egwú ma ọ bụ a firecracker - ibi na ọtụtụ ihe ndị doro anya na n'ezie na 'ezi' Spain.
Na mgbakwunye, ọ bụ ezie na ọtụtụ mba na-ekwe nkwa ịnwe obodo bistro, mana ụdị nri dị iche iche dị ala enweghị ike ijide cappucino na ngosipụta na-adịghị agwụ agwụ nke Spain nke onye ọ bụla, agwa ya, na-akpọ ya, ma na-enwekarị nsogbu.
Ebe ndị a enweghị ike obibi baristas na overrated agwa. Ha bụ ihe ntanetị, otu ụzọ dị mkpa nke ụzọ ndụ ebe onye njikwa ego nwere ike ibute cortado ngwa ngwa site n'aka ndị ọrụ ọwụwa anyanwụ sandwiches site na mpempe akwụkwọ ọlaọcha ma nwee ekele maka nri ụtụtụ kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ebe a na-ewere gin na tonic ma ọ bụ iko mmanya na mbara ihu ma ọ bụ na oche ndị na-adịghị akwụsi ike na-agbanye na asphalts.
Zọ ndụ dị n'èzí azụlitewo ọtụtụ ndị mmeri nke Spanish. Ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ, Seve Ballesteros, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, Miguel Indurain, na Fernando Alonso nọ ọdụ n'akụkụ klọb, dịka ọmụmaatụ, Barcelona na Real Madrid ndị na-achị ụwa.
Kemgbe 1992 ama ama ama n'egwuregwu Olympic, ọnụọgụ ụmụnwanyị ndị na-asọ mpi arịgoro site na 300,000 ruo 700,000. Agbanyeghị, onye ọ bụla nwere ike iri ụdị ndụ ndụ Spanish.
Site na njem ugwu na-agagharị na igwu mmiri na sọọfụ, site na bọọlụ na bọọlụ ruo tenis na bọọlụ aka, yana site na mgbe ị gachara ọrụ ma ọ bụ gbaa gburugburu nke Padel na klọb na-agagharị n'akụkụ obodo oke osimiri na-achọ kafe, ihe omume ahụ dị iche siri ike ịpụ.
Ihe omuma banyere ihe ojoo nke ndi Iberia emeela ka onodu ya di iche iche ma nyekwa ya peel ndi mmadu nke mere ka mba a ghọọ ulo nnwere onwe, n'èzí nke akwadoro iji kwụọ ụgwọ ihe ndị ahụ masịrị ya site na mmetụta ndị Rome, Arabic, Gothic na Modernist.
Ike banyere injinia bụ ntọala nke ụzọ ndụ Spanish, emeghị ka enweghị mgbagwoju anya site n'ọtụtụ ebe UNESCO World Heritage - Barcelona nke Sagrada Familia, Granada's Alhambra, Salamanca's Old City, na La Mesquita na Córdoba - njikọta nke florid, gothic, renaissance na Moorish Mudéjar, dịka basilica na ụlọ alakụba na otu.
9 Ndi mmadu
Mmetụta obi ụtọ nke netwọkụ na-emetụta obodo Spanish. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme ndokwa ịkọ maka, kwenye ekwenye, na ime mmemme. A na-ahụta afọ na obi ụtọ na ezinụlọ bụ ihe niile - n'agbanyeghị na ị bụ mgbasawanye kachasị nso ma ọ bụ nke kachasị guzosie ike, ị ga-abụ otu ihe, ọ bụghị karịa ebe a na-eri nri na ehihie Sọnde.
Ndị na-erite uru, nnwale, ndị na-achị achị, ndị na-achị ụwa, ndị omenala, na ndị na-eme ihe n'ụzọ kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ ndị bi na Spen bụ ihe na-atọ ụtọ nke ndị odide na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dabere na akụkọ ihe mere eme ogologo oge, nke na-aga n'ihu ruo n'oge dị ka oge.
Agbanyeghị, nke a dị ka ọ ga-ewusi ntụkwasị obi ike ịbanye na 21st Century dị ka onye ọsụ ụzọ n'akụkụ na-enweghị ngwụcha nke ihe bara uru na ndụ. Ndị Spain nwere ọ areụ ma nwee ezigbo agwa, mana ọ dabara nke ọma, ha nwere ike ịkpọ gị, nke na-egosi na ndị na-asọ oyi nwere ike isonye ma mee ka ụdị nke ndụ ha kacha mma.
10. Spain Onwe Ya
Anyị n'ozuzu anyị nwere echiche dịgasị iche iche banyere ihe na-egosi ụzọ ndụ kacha mma, mana ịmụrụ Spain nwere ọtụtụ ihe nrịba ama nke emepụtara site na ụwa karịa ọtụtụ afọ
Ihe ọ bụla ị na-achọ, Spain nwere obodo, agwaetiti, na ụsọ oké osimiri ndị na-egosi ọnọdụ dị mma maka ntụgharị nke ndụ gị kacha mma. O nwere obodo ndi mepere emepe na obodo ndi mmadu, obodo ndi na-egbu azu, obodo ndi na-acho ahia, na ndi oghe di iche iche na-enye nkwekorita na obi iru ala site na ebe obula.
Osimiri, ugwu, na ndagwurugwu na-anọgide na-adị ebube mgbe niile dị egwu maka oke ụgbọ mmiri superyacht na mmepe ọhụụ
Basic nkọwa maka obibi site Investment for Spain
Opekempe ego maka Biri site na itinye ego na Spain
Biri site na itinye ego na Spain
Ikike obibi enyere maka afọ 2
Oge nhazi maka obibi site na itinye ego nke Spain
2 ka 4 izu
Mgbe afọ 5 nọrọ nke iwu kwadoro
Mgbe afọ 10 nke iwu obibi.
E kwere ka ụmụ amaala Spain nweta Abụọ Abụọ
Nhọrọ ntinye ego maka Ebe obibi site na itinye ego nke Spain
- Ngwongwo ala (500,000)
- Ahịa ma ọ bụ nkwụnye ego n'ụlọ akụ (€ 1 million)
- debtgwọ ọha (million 2 nde)
Ihe kpatara ị ga - eji gaa ụlọ obibi nke Spain
Spain bụ otu ebe ezumike kachasị ewu ewu na Southwest Europe. Ọ nwere ọdịdị dị ebube, ọdịbendị dịgasị iche na akụkọ ihe mere eme. Spain bụ onye zuru oke na European Union na mpaghara Schengen. Nke ahụ pụtara na ụmụ amaala Spanish nwere ọ enjoyụ na njem enweghị visa na-enweghị njedebe n'ime Europe niile. Mmemme nnabata ego ama ama na Spain dị oke ọsọ ma dịkwa mfe. Ọ na-enye gị na ezinụlọ gị uru niile na enweghị ebe ị ga-ebi na mba ahụ.
Mbata na ezinụlọ na Spain
Di ma ọ bụ nwunye na ụmụaka na-erughị afọ 18 nwere ike ịnweta ikike obibi dịka atụmatụ njikọta ezinụlọ si dị, mgbe a nabatarala ndị isi ego ahụ. Ndị nne na nna na ụmụaka karịrị afọ 18 nwekwara ike tozuru oke, ma ọ bụrụ na ha ejiri ego dabere na onye na-etinye ego na ya.
Mbibi Site na mmemme itinye ego na Spain
Usoro dị oke ọsọ. Ọ na-ewe ụbọchị 10-15 site na iweta ngwa ahụ. Agbanyeghị, tupu ntinye akwụkwọ anamachọihe ahụ, onye nyocha ahụ ga-emerịrị mbọ inweta ala. Ọ pụtara na onye anamachọ ahụ ga-aga Spain tupu akwụkwọ anamachọihe ahụ, bịanye aka na nkwekọrịta ịzụta na ngwongwo ahọrọ, wee mepee ụlọ akụ.
Mgbe ịlaghachitere n'ụlọ, onye na-arịọ arịrịọ na-ebufe ego ahụ iji malite usoro ahịa. Usoro a nwere ike were site na ọnwa abụọ ruo atọ, mgbe nke a gasịrị, onye anamachọihu nwere ike iweta akwụkwọ anamachọihe ahụ ma nweta akwụkwọ ikike obibi.
Iwu Spanish 14/2013, na-enye ndị na-abụghị ndị EU ego ka ha tozuo maka ibi na Spanish n'okpuru mmemme visa ọlaedo. Ntinye ego ndị a tozuru maka visa ọla edo nke Spanish.
Nchịkọta ego maka Spain
Iji ruo eru maka ibi na itinye ego maka ego achọrọ iji zụọ ihe onwunwe kacha nta nke EUR 500,000. Ọ bụ nhọrọ onye ọchụnta ego ma ọ ga-ebi na ụlọ azụtara ma ọ bụ gbazite ya. Na mgbakwunye, a ga-akwụ ụgwọ iwu na gọọmentị na ụtụ isi, gbakọtara gburugburu EUR 60,000 maka ezinụlọ nke 4.
Nkwado ndị ahịa maka obibi site na itinye ego maka Spain
Ndi otu anyi Ịnọ nke ndị ọrụ ego maka Spain na Ịnọ by Onyeka Onwenu Lawyers maka Spain na-enye ndị ahịa na ezinụlọ ha na Spain nkwado maka ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Spain, obibi site na itinye ego na Spain na ohere mbata ndị ọzọ na mba ọzọ, na mba 37.
Ọrụ anyị abụghị nanị ebe obibi site na itinye ego na Spain ma ọ bụ Golden Visa si Spain ma ọ bụ ụmụ amaala site na itinye ego na Spain ma ọ bụ paspọtụ nke abụọ, anyị na-enyekwa aka na ohere itinye ego ụlọ kachasị mma na Spain, na-enye azịza zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọlite ​​ụlọ ọrụ na Spain ma ọ bụ oke osimiri, ndị ọrụ mmadụ na Spain na ọtụtụ ndị ọzọ, nke gụnyere atụmatụ ego na ọtụtụ ndị ọzọ.
Inyere ndi ahia anyi aka inweta ihe nlere nke ndi amaala n’ime ya na Spain na nnabata abuo.
Nkwado pụrụ iche maka ụmụ amaala nke Spain:
Anyị na-enye ọnụ Ebe obibi site na ọrụ ntinye ego maka Spain, site na ọnụ anyị ntinye ego na ụlọ ọrụ iwu mbata na ọpụpụ maka Spain, ndị ọka iwu ọchụnta ego maka ọpụpụ ego maka Spain, ọnụ ala obibi site na ndị ndụmọdụ itinye ego na Spain, ọnụahịa obibi nke ndị ọka iwu ego maka Spain na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ maka Spain
Biri site na itinye ego na Spain gaa mba 37.
Visa ọlaedo na Spain gaa mba 37.
Ensbụ amaala site na itinye ego site na Spain ruo Mba 37.
Paspọtụ nke abụọ si Spain gaa mba 37.
Business dabere mbata na ọpụpụ si Spain ka 106 Mba.
Ibi site na mmemme itinye ego na Spain.
Mmemme visa ọlaedo na Spain gaa mba 37.
Ensbụ ụmụ amaala site na mmemme itinye ego na Spain gaa mba 37.
Mmemme paspọtụ nke abụọ site na Spain gaa mba 37.
Mmemme mbata na azụmahịa si Spain na 106 Mba.
Mbibi site na Investment nke Spain site na Estlọ
Anyị na-enye nkwado maka itinye ego na ụlọ na Spain na onye ahịa kwesịrị inweta ezigbo nloghachi na ego na Spain, oge ọ bụla, ha chọrọ ịpụ na ntinye ego ha mere maka obibi ha site na itinye ego na Spain. Anyị na ndị na-emepe ụlọ kachasị mma na Spain nwere ezigbo ndekọ na ihe onwunwe ha dị na ezigbo ọnọdụ na Spain, na-eweta ezigbo nloghachi.
Mmemme obibi ụlọ kacha mma maka Spain na itinye ego na ezigbo ala na Spain.
Mkpa ịmata - Spain Residency by Investment
Nọ na ya site na onye ọka iwu itinye ego na Spain ga-enye aka nkọwa akwụkwọ edepụtara maka obibi gị nke ọma site na itinye ego na Spain. Ọrụ ọkọlọtọ anyị maka obibi site na Investment to Spain gụnyere:
Ndị ọkàiwu anyị ga-aghọta ihe ị chọrọ maka ịkwaga Spain ma ọ bụ Spain, dabere na ndụmọdụ ndị a ga-atụ
Anyị na-eduzi mbido ọrụ, iji kwadebe akụkọ tupu ịkwado Ọnọdụ site na itinye ego na Spain maka ndị ahịa maka inweta ikike obibi nke Spain yana iji belata ihe egwu nke ịjụ.
Dabere na akụkọ siri ike maka Spain, anyị na-akwado mmemme ndị ọzọ maka ịga nke ọma.
Maka anyị ka anyị jiri akwụkwọ itinye ego maka Spain ga-aga n’ihu n’ihu obibi na Spain, anyị ga-achọ akwụkwọ ikike iji akwụkwọ nyocha nke ndị ahịa na ndị ezin’ụlọ ezinyere na paspọtụ.
Ntụgharị na apostille nke akwụkwọ Obibi site na ngwa itinye ego maka Spain. Ndị ọka iwu anyị pụrụ iche maka obibi site na itinye ego maka Spain na visa ọlaedo ga-enyere aka jupụta ụdị na akwụkwọ.
Ozugbo gị na ezinụlọ gị akwụkwọ maka ibi site na itinye ego maka Spain dị njikere, anyị ga-ejupụta ya na ndị isi dị mkpa nke Spain.
Duration: 2 ka 4 izu
Ozugbo anabatara akwụkwọ maka obibi gị site na itinye ego na Spain, anyị kesara gị ozi ọma wee bido ịkwadebe maka nkwado ndị ọzọ.
Anyị anaghị akwado ma ọ bụ nye ndị bi na ya site na ọrụ ntinye ego na Spain ka ndị a kpọtụrụ aha n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ na Spain:
Ịnọ site na ọrụ itinye ego maka Spain enyeghị ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-ekesa ogwe aka na ngwa agha sitere na ma ọ bụ Spain.
Ịnọ site na mmemme itinye ego na Spain enyeghi maka onyunyo onyunyo na Spain ma obu oru nzuzo nke ulo oru ihe omuma na ma obu site na ma obu na Spain.
Ịnọ site na itinye ego nyocha maka Spain enyeghị maka mmebi iwu ọ bụla na mpụ na Spain.
Ịnọ site na nkwado ego maka Spain abụghị maka ndị na-akụzi mkpụrụ ndụ ihe nketa na Spain.
Ịnọ site na ọrụ itinye ego maka Spain abụghị maka azụmaahịa na-emenye ọgwụ ma ọ bụ ihe egwu dị egwu na ngwa agha nuklia na Spain.
Ịnọ site na mmemme itinye ego nkwado maka Spain adịghị maka ndị mmadụ maka Spain na-azụ ahịa, nchekwa na Spain, ma ọ bụ njem nke akụkụ mmadụ.
Ịnọ site na itinye ego maka Spain abụghị maka ụlọ ọrụ nkuchi iwu na-akwadoghị.
Ịnọ ọrụ mmemme maka Spain abụghị maka òtù nzuzo okpukpe na ọrụ ebere ha na Spain.
Ịnọ site na ọrụ itinye ego na Spain adịghị enye ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na Spen.
Ebe Obibi Anyị ndị ọka iwu na Spain anaghị akwado azụmahịa azụmahịa na ngwa ngwa ọgwụ na Spain.
“Ọkwa Dị Mkpa : MM Solutions INC na-akpachapụ anya iji wepụta akwụkwọ AML maka ndị ahịa maka Spain na KYC ha mana anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka ịjụ ndị isi na Spain maka nnabata nke ngwa maka Ịnọ site na itinye ego na Spain.
Biri site na itinye ego na Spain na mba ndị ọzọ, gbakwunyere ọtụtụ nkwado ndị ọzọ.
Anyị na-enye ebe obibi kachasị mma site na nkwado ego na Spain maka itinye ego, mbata na ọpụpụ na atụmatụ ụlọ na Spain.
N'ịbụ onye mba ụwa bi na nkwado site na ahụmịhe itinye ego na iwu chọrọ iwu Spain, anyị na-emepụta azịza kacha mma.
Ebe obibi anyị site na ọrụ ntinye ego maka Spain na-enye ọnụahịa dị ọnụ ala, yana ọnụego mmeri kachasị mma maka Spain.
Anyị emeela ọtụtụ afọ nke ahụmahụ maka obibi abụọ na Spain na-akwado ndị ahịa na ezinụlọ ha maka Spain.
Ahụmịhe obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain na ndị ọrụ iwu na Spain na-enye ndị ahịa nkwado.
Anyị nwere ndị ọka iwu kachasị mma na ndị nnọchi anya maka usoro njikwa na ngwa Spain na-etinye aka maka ọganiihu gị.
Tupu ị bi na Spain na mgbe akwadochara, onye otu anyị toro eto ga-anọ ebe ahụ maka azụmaahịa ma ọ bụ nkwado onwe onye maka Spain
Anyị nwere ahụmịhe mba ofesi na obibi site na itinye ego gụnyere Spain, na-enyere ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile aka ọrụ kachasị mma.
Ọ bụrụ, obibi gị site na itinye ego na Spain adaala, enwere mba 36 ọzọ anyị na-ejere ozi, anyị dị njikere na atụmatụ B.
Gbakọọ ego maka obibi site na itinye ego na Spain
Iji gbakọọ ọnụahịa maka obibi site na itinye ego maka Spain biko jupụta na nkọwa niile gụnyere ndị ezinụlọ na afọ ha. N'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa maka Spain, anyị nwere ike ịnye ọrụ ka mma na ọnụ ala. Ngụkọta ego ga, gụnyere, ego maka obibi site na mmemme itinye ego na Spain na ebubo ndị ọzọ.
Ụdị visa maka Spain
Usoro ikike ikike maka Spain
Ebe obibi nwa oge na Spen
Na-adịgide Adịgide Spen na Spain
Amaala nke Spain
Ndị Embassies na Consulates nke Spain
Estụ isi na Spain
Ibi site na itinye ego na Spain na Ọrụ Ndị Ọzọ
Anyị edepụtara ala ọrụ ole na ole anyị na-enye na Spain maka ngwa ngwa ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwaga ezinụlọ gị na Spain site na itinye ego, anyị dịka onye gị na Spain, nọ ebe ahụ ịnye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dịka na mgbe ị nwere ike ịchọ na Spain na ọnụ ọnụ ọnụ.
Ewezuga obibi site na itinye ego maka nyocha na Spain, anyị na-enye azụmahịa, ọrụ IT na ndị ọrụ ebere na Spain, nke ị na-enweghị ike ịchọta n'okpuru otu nche anwụ nke ndị ọkachamara ọ bụla ọzọ nyere maka Spain na-eme anyị ụlọ ahịa otu nkwụsị maka Spain na mba 106.
"Anyị etinyela ọtụtụ afọ na mba ụwa na mba 106 iji nyere ezinụlọ, ndị mmadụ n'otu n'otu, na azụmaahịa nke Spain aka inweta ihe mgbaru ọsọ ha na ebumnuche ha."
Anyị na-akwado ụzọ onye ahịa anyị gafere Obibi site na itinye ego maka Spain site na enyemaka nke ndị ọka iwu anyị, ndị ndụmọdụ na njikọta na Spain na mba ụwa.
Companylọ ọrụ dị na Spain
Anyị nwere ike inyere gị aka deba aha ụlọ ọrụ na Spain ma ọ bụ Oke Osimiri na Mba 106 (Ọnụ ego ịdenye ụlọ ọrụ na Spain dị ọnụ ala karịa anyị.)
Akaụntụ Banki na Spain
Onye ọ bụla na-achụ ego na-akwaga Spain ga-achọ akaụntụ ụlọ akụ nke onwe na Spain na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ na Spain, anyị nwekwara ike inye aka na akaụntụ akụ na mba.
Ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na Spain
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba izu na Spain, maka azịza ugwo dijitalụ na Spain dị ka ụzọ ọdịnala ma ọ bụ fintech ịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ na Spain ma ọ bụ ihe ngwọta crypto, ka anyị mara.
Mgbe Obibi site na ulo oru mbo ka Spain ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ bido azụmaahịa site na ịzụ azụmaahịa dị na Spain ozugbo ịmalite na Spain.
Ọrụ Ndị Ọrụ HR na Spain
Anyị ụlọ ọrụ ndị ọrụ mmadụ na Spain nwere ike inyere gị aka na mbanye ngwa ngwa. I nwekwara ike ziga ohere na Spain free.
Nọmba ekwentị mebere maka Spain
Sistemụ azụmahịa nke Spain yana nọmba mebere maka Spain Mba 102 na 291 Obodo.
Ọrụ Atụmatụ Ego na Spain
Accounting, nlezianya na Spain na otutu ihe.
Adreesị Officelọ Ọrụ Virtual na Spain
Mbido azụmahịa na Spain
Mgbe obibi site na itinye ego na Spain, Mbido azụmahịa na Spain.
Anyị na-enye n'okpuru ebe a banyere azịza IT na Spain
Emebe weebụ na Spain
Mmekọrịta Ecommerce na Spain
Mmepe weebụ na Spain
Mmeghe Blockchain na Spain
Mmepe ngwa na Spain
Development Software na Spain
SEO na Spain
Ndị ọka iwu maka obibi site na itinye ego na Spain
Anyị na-enye obibi obibi iwu site na ngwọta Investment maka Spain na ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa anyị dị ezigbo mkpa, maka Spain, anyị bụ ndị isi, ụlọ ọrụ iwu anyị maka Spain nwere ndị ọrụ mbata na ọpụpụ kachasị mma na Spain, anyị nwere aha ọma maka ịnye ahụmịhe kachasị mma maka Spain doro anya usoro azịza ego maka ndị Spain na ndị ezinụlọ ha. Ebe obibi anyị site na ndị ọrụ ntinye ego maka Spain na-enye azịza echepụtara maka ọganiihu ndị ahịa.
Ndị ezinaụlọ gị (ụmụaka, nwunye, nne na nna) tozuru oke ịnabata ikike bi na Spen, ma anabatakwa ikike ibi na Spain.
Achọrọ ikike ọka iwu maka Spain maka iwu niile gbasara gị site na obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain. Ọ bụrụ n ’ịnọ na Spen ma ọ bụ ị chọọ ịga Spen, anyị ga-enweta ike inye gị ọka iwu ebe a.
Anyị anaghị ana ego maka inweta ikike ọka iwu. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmalite ndebanye aha ụlọ ọrụ maka Spain n'ụzọ dị anya, a ga-enyerịrị ikike ọka iwu gị nke ọma iji mee ihe na mpaghara Spain. Dabere na obodo obibi gị, ọ ga - abụrịrị onye dapụrụ ma ọ bụ onye iwu iwu site na ndị nnọchi anya Spain.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị - Nbibi site na itinye ego na Spain
Gini bu nkowa nke ibi site na itinye ego na Spain?
Idencynọ site na itinye ego na Spain, enwere ike ịkọwa dị ka, ịnweta nnabata nke Spain site na itinye ego na akụnụba nke Spain site n'ụzọ dị iche iche dịka, azụmaahịa, ala na ụlọ, agbụ gọọmentị, wdg. Tinye maka ibi site na itinye ego na Spain, nnabata site na mmemme itinye ego na Spain na-akwado site na obibi site na ọrụ ego maka Spain, site na ebe obibi anyị kachasị mma site na ndị ọka iwu ego na Spain, ndị ọbịa kachasị mma site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain na ndị ọbịa kachasị mma maka Spain, na-arụ ọrụ na ebe obibi kacha mma site na ndị na-ahụ maka itinye ego na Spain, na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị mbata na ọpụpụ kacha mma. na Spain.
Ebe obibi site na ọrụ ntinye ego maka Spain | Ebe obibi site na ndị ọrụ ntinye ego na Spain | Ebe obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain | Ebe obibi site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain | Mbibi nke ndị ndụmọdụ itinye ego maka Spain
Gịnị bụ nkọwa nke ụmụ amaala site na itinye ego na Spain?
Ibu nwa amaala site na itinye ego na Spain, enwere ike ịkọwa dị ka, ịbụ nwa amaala nke Spain site na itinye ego na akụnụba nke Spain site n'ụzọ dị iche iche dịka, azụmaahịa, ala na ụlọ, agbụ gọọmentị, wdg na Spain. Tinye maka ụmụ amaala site na itinye ego na Spain, ụmụ amaala site na mmemme itinye ego maka Spain nke ndị amaala site na ọrụ itinye ego maka Spain, site na ụmụ amaala anyị kachasị mma na ndị ọka iwu itinye ego na Spain, ụmụ amaala kachasị mma site na ndị ọka iwu itinye ego na Spain na ụmụ amaala kachasị mma site na ndị na-ahụ maka itinye ego na Spain, na-arụ ọrụ na ụmụ amaala kachasị mma na Spain, yana ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbata na ọpụpụ na Spain.
Ọnụ ego bara uru maka ọpụpụ maka Spain | Ndị ọkàiwu na-akwụ ụgwọ maka mbata na Spain | Bara uru ọ investụ ọpụpụ mbata na ọpụpụ na Spain | Ndị ọkàiwu na-akwụ ụgwọ bara ọgaranya na Spain | Ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọpụpụ dị ọnụ ala maka Spain | Lọ ọrụ iwu na-akwụ ụgwọ maka ọpụpụ maka Spain
Gịnị bụ nkọwa nke paspọtụ nke abụọ na Spain?
Paspọtụ nke abụọ na Spain, enwere ike ịkọwa dị ka, ịnweta nwa amaala nke Spain site na itinye ego na akụnụba nke Spain site na ụzọ dị iche iche dịka, ala, azụmahịa, agbụ gọọmentị, wdg. Tinye maka paspọtụ nke abụọ na Spain, mmemme paspọtụ nke abụọ nke Spain kwadoro ọrụ paspọtụ nke abụọ maka Spain, site na ndị ọka iwu kachasị mma nke abụọ na Spain, ndị ọka iwu kacha mma nke abụọ na Spain na ndị na-ahụ maka paspọtụ kacha mma maka Spain, na-arụ ọrụ na ndị nnọchi anya paspọtụ kacha mma na Spain, yana ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọpụpụ kachasị mma na Spain.
Ọrụ paspọtụ nke abụọ maka Spain | Ndị nnọchi anya paspọtụ nke abụọ na Spain | Ndị ọka iwu paspọtụ nke abụọ na Spain | Ndị ọka iwu paspọtụ nke abụọ na Spain | Ndị ndụmọdụ ndụmọdụ paspọtụ nke abụọ maka Spain
Gịnị bụ nkọwa nke visa ọlaedo na Spain?
Akwụkwọ ikike ọlaedo dị na Spain, nwere ike ịkọwa dị ka, ịnweta ikike obibi nke Spain site na itinye ego na akụnụba nke Spain site na ụzọ dị iche iche dịka, agbụ gọọmentị, azụmaahịa, ala na ụlọ, wdg. Tinye maka visa ọlaedo na Spain, usoro mmemme ọla edo nke Spain na-akwado ọrụ visa ndị ọlaedo maka Spain, site na ndị ọka iwu visa ọla edo kacha mma na Spain, ndị ọka iwu kacha mma kacha mma na Spain na ndị ọkachamara ịzịza maka ọla edo kacha mma na Spain, na-arụ ọrụ na ndị ọrụ nlezianya kacha mma na Spain, yana ndị ọrụ nyocha ọpụpụ kacha mma na Spain.
Ọrụ visa visa maka Spain | Ndị nnọchi anya visa ọla edo na Spain | Ndị ọka iwu visa ọla edo na Spain | Ndị ọka iwu visa ọla edo na Spain | Ndị na-ahụ maka visa ịla ama maka Spain
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe maka ibi na Spain?
Obere ego maka obibi site na itinye ego na Spain bụ EUR 500,000.
You na-enye nkwado iwu maka Spain maka obibi site na itinye ego na ya?
Ee, onye ọka iwu anyị na Spain na ndị nnọchi anya Spain na-akwado nkwado maka obibi site na itinye ego na Spain.
Nbibi site na itinye ego na Spain dị oke ọnụ?
Akwụ ụgwọ obibi site na itinye ego na Spain na obibi site na ego itinye ego maka Spain bụ maka nnukwu mmadụ bara uru, anyị na-ana naanị ụgwọ ego maka obibi site na itinye ego na Spain, anyị na-enyekwa ọtụtụ nkwado ndị ọzọ maka ibi site na ntinye ego.
Kedu ndị bi na obodo nwere ike itinye akwụkwọ maka obibi site na itinye ego na Spain ma ọ bụ visa itinye ego na Spain?
Enwere ike iji ụmụ amaala nke mba ọ bụla were obibi site na ndị ọrụ itinye ego maka obodo mana mana ihe atụ ole na ole bụ Obibi site na itinye ego na Spain site na Asia, Nbido site na itinye ego na Spain site na Africa, Nbibi site na itinye ego na Spain si Europe, Nbido site na itinye ego na Spain si South America Bido biri site na itinye ego na Spain si Malaysia, I biri site na itinye ego na Spain si Bangladesh, I biri site na itinye ego na Spain si Indonesia, Nbido site na itinye ego na Spain si Sri Lanka, I biri site na itinye ego na Spain si Nepal, Nbido site na itinye ego na Spain si Nepal site na itinye ego na Spain si UAE.
Ọkachamara ọkachamara site na Nduzi Ulo maka Spain
Rịọ oge maka ndụmọdụ obibi gị site na itinye ego na Spain
Okwu ndị dị mkpa na obibi site na itinye ego maka Spain
Ministerio de Industria, Energía, y Turismo (Bekee)
Ministerio de Economía y Hacienda (Spanish, Bekee)
Ozi nke Ikpe Ziri Ezi (Spanish)
Ozi nke gburugburu (Spanish, French, Bekee)
Ozi nke Development (Spanish, ya na nkọwa nke dijitalụ tachograph na Bekee).
Link ka Ngalaba Immigrashọn nke Spain , na-ahụ maka ịhazi usoro maka ịgbatị Immigrashọn na Spain